नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको भाउ घटायो, अब कति ? « Lokpath
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले इन्टरनेटको मूल्य घटाएको छ । टेलिकमले हाल उपलब्ध गराइरहेको लिज कनेक्टिभिटीको नयाँ महशुल दर कायम गरेको हो ।
गत असार १ गतेदेखि लागू हुनेगरी इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट दुवै लिज लाइनको महशुल दर ३६ प्रतिशतसम्म कम हुनेगरी कायम गरिएको टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इन्टरनेट लिज लाइन अन्तर्गत १ देखि २० एमबीपीएस ब्यान्डविथको महशुल दर पहिले २,५०० रुपैयाँ रहेकामा अब १,६०० रुपैयाँ मात्र हुनेछ । त्यसैगरी २१ देखि ५० एमबीपीएसको महशुल दर पनि २,३०० रुपैयाँबाट घटाएर १,६०० रुपैयाँ नै कायम गरिएको छ ।
५१ देखि १०० एमबीपीएस र १०० एमबीपीएस ब्यान्डविथ भन्दा बढी क्षमताको महशुल क्रमशः २,१०० रुपैयाँ र १,९०० रुपैयाँ रहेकोमा अब दुवैको महशुल दर १,५०० रुपैयाँ कायम गरिएको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले जानकारी दिए ।
इन्ट्रानेट लिज लाइन अन्तर्गत १ देखि १० एमबीपीएस ब्यान्डविथको महशुल रु. २,७०० रहेकोमा अब २,४०० रुपैयाँ, ११ देखि १०० एमबीपीएसको २,४०० रुपैयाँ रहेकोमा अब २,१०० रुपैयाँ र १०० एमबीपीएस भन्दा बढीको २,१०० रुपैयाँ रहेकोमा अब १,८०० रुपैयाँ कायम गरिएको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २०७९,असार,९,बिहीवार १५:२७
नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले डाक्यो वार्षिक सभा, मर्जर तथा प्राप्तिको प्रस्ताव
काठमाडौं । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ३१ असारमा वार्षिक साधारणसभा बस्ने भएको छ । सभामा कम्पनीले अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग
प्रभु इन्स्योरेन्सको बोनस सेयर डिम्याट खातामा जम्मा
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सले ११ प्रतिशत बोनस सेयर सम्बन्धित सेयरधनीको डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिएको छ । कम्पनीले १६ चैतसम्म सेयर
काठमाडौं । आमाबुबाको लागिआफ्ना सन्तान प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ । सन्ततिको सुनौलो र उज्वल भविष्यको चाहाना सदैव आमाबुबाले राखेका हुन्छन्